I-4 I-autumn 2017 - I-Foundation Foundation
Ikhaya I-4 Autumn 2017
"Ubusuku budweba kakuhle" njengoko bathetha kule ndawo ngexesha lekwindla. Ngoko ukuguqula ingqwalasela yakho kwiingcamango ezifudumeleyo, nantsi amabali ambalwa kunye neendaba eziphathekayo malunga neSiseko soMvuzo kunye nemisebenzi yethu kwiinyanga ezimbalwa ezedlule. Asinakufakela yonke into esiyenzile njengoko usenokuba ulifunde amabali asele kwizinto zethu zeendaba zeveki website okanye lethu Twitter ukudla.
Ndikunqwenelela ixesha elimnandi xa lisiza. Uxolo nothando kuni nonke nivela kuwo wonke umntu kwiSiseko soMvuzo.
Ukuvunyelwa kweRCGP yeSiseko soMvuzo
Ubuchopho Bakho kwi-Porn by Gary Wilson
"Indawo entsha yamayeza" -iNkomfa yezeMpilo ye-RCGP yaBafikisayo
Uphando lwe-TRF olupapashwe
Iziko loLutsha kunye nokuTyunjwa koBulungisa boLwaphulo-mthetho
Ubudlelwane baseScotland - Uqeqesho lwezoTyhulo zoTyhini kwaBaqabane
I-Edinburgh Medico-Chirurgical Society (eyasekwa ngo-1821)
Umbutho Wokuphucula Impilo Yesondo (SASH)
Iqela leTsha leLutsha, iWonder Fools ithatha i-Porn kwi-Coolidge Impact
I-Foundation Foundation iqinisekiswe yiKholeji yaseRoyal of General practitioners ukuqhuba imfundo yezemfundo eqhubekayo (i-CPD) ye-GPs ngokubhekiselele kwimpembelelo ye-intanethi kwiimpilo yengqondo kunye nempilo. I-warrant iyafikelela kumalungu kwanoma yiphi enye iikholeji zeRoyal zeRoyal e-UK nase-Ireland.
Siza kubakhulula oku kubalulekileyo njengemihlangano yoomasifundisane. Ngamnye uya kuba neengqinamba ze7 CPD. Iingcali zengqondo, oongikazi kunye nabagqirha bamkelekile. Njengoko iifommisti ziza kufunwa ngokukhawuleza ukuba zinike iingcebiso zezempilo kubantu abafuna i-anti-counter-counter counter for the erectile dysfunction, siya kubambisana nabo. Isicwangciso sokuqala ukuhambisa iiworkshops ngoJanuwari. Jonga iinkcukacha. Ukuba ungathanda ulwazi oluninzi kwiindibano zocweyo okwangoku, nceda uqhagamshelane mary@rewardfoundation.org.
Ubunjani bakho kwiSigonyo nguGary Wilson
The lwe sibini le ncwadi ecacileyo necacileyo ngoku ikhoyo.
"Ubuchopho bakho kwi-Porn bubhalwe ngolwimi olucacileyo oluchanekileyo kwiingcali kunye noluntu ngokufanayo kwaye lugxile ngokuqinileyo kwimigaqo ye-neuroscience, yokuziphatha kwengqondo kunye nokuziphendukela kwemvelo ... Njengengcali yeengqondo, ndichithe ngaphezu kweminyaka engamashumi amane ndiphanda iziseko zokukhuthaza. kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba uhlalutyo lukaWilson luhambelana ncam nayo yonke into endiyifumeneyo. ”
UProfesa Frederick Toates, iYunivesithi eViweyo, umbhali we Ukusebenza Kwenqweno Yezesondo: I-Enigmatic Urge.
Kwi 2014, nini Ubunjani bakho kwiSigonyo yapapashwa kuqala, i-intanethi ye-intanethi kunye nabanye abatyelelekileyo kwezobuchwepheshe bokuxhamla kwabantu ngokungabonakali kwintetho yesidlangalaleni. Ukususela ngoko i-culture width iye yaqonda ngokukhawuleza ukuba ukukhangela kwikrini okanye ukungena kwi-headset ye-VR ayiyona indlela yokukhutshwa kwezesondo. Ubungqina bubonisa ngolu hlobo. Umxholo wezocatshulwa wezocatshulwa, okhoyo kwiimfuno, kwaye ngokubonakalayo okungafaniyo, kungabangela ingozi enkulu kwimpilo yabantu. Izifundo ezingamashumi amane ngoku zidibanisa ukusetyenziswa koononophelo kumsebenzi onobuhlwempu kunye neengxaki zempilo yengqondo. Izifundo ezingamashumi amabini anesithathu zidibanisa ukusetyenziswa kwezesondo kwiingxaki zezesondo kunye nokunyusa okunyanisekileyo kwizinto zesini. Ezi zintlanu zezi zibonisa ukunyusa ngenxa yokuba amadoda ahlolwe iingxaki eziphilileyo ngokuphelisa ukusetyenziswa koonobumba.
Ngokuchasene nembono ethandwayo, ulutsha luyazisebenzisa iinkonzo ze-GPs rhoqo njengamanye amaqela eminyaka. Ii-GPs ebesizise kule nkomfa zithe khange babuze imibuzo eyiyo yezigulana ezithile xa zijamelene neemeko ezithile. Omnye ugqirha uthe ukutyhilwa kwempembelelo ye-porn "kufana nokufumana indawo entsha yeyeza okanye ukufumana ilungu elitsha." Sasonwabile kukuba le ntetho yehla kakuhle kwaye yayifanelekile kwiinkqubo zabo zeklinikhi. Oogqirha bathi bazinikele ekubuzeni le mibuzo inzima kwixa elizayo.
Oku kwenzeke kwinkomfa yokuqala yaseScotland kwimpilo yeselula. Kwakuhlelwe e-Edinburgh ngomhla we-17 kaNovemba kwaye yahlelwa yi-RCGP kunye neengcali ekufikeni kwaseLondon. Kukho abasebenzi bezempilo be-40 abaphulaphuli.
NgoFebruwari 2017, iqela le-TRF laya kwi-4th INgqungquthela yamazwe ngamazwe malunga nokuziphatha kakubi kwi-Israel. Le ngqungquthela yezifundo ibonise olona phando lwamva nje kwiimpembelelo ezahlukeneyo ze-intanethi ekuziphatheni. Ngenxa yokubaluleka kwesi sifundo kuluntu lwezonyango kunye nakwizifundo zophononografi, siqulunqe inqaku ukwenza ukuba olu phando lubalulekileyo lufumaneke kwaba bantu.
Iifografi kunye nobulili Amaphepha oPhando kwiNgqungquthela ye-4th International kwiingxaki zokuziphatha ya papashwa Ukunyanzela ngokwesondo kunye nokunyanzelisa kwi-Intanethi nge-13 Septemba 2017. Iya kuvela ngokushicilelwa kuMqulu 24, kwiNombolo 3, 2017. Iikopi zasimahla ziyafumaneka ngokucela ku darryl@rewardfoundation.org.
Umphathi wethu omkhulu, uMary Sharpe wenziwe uMdibanisi weZiko loLutsha kunye noBulungisa boLwaphulo-mthetho (i-CYCJ) esekwe kwiYunivesithi yaseStrathclyde eGlasgow. Siyavuya. UMary uthe "Ndiyathemba ukuba izokunceda ekusasazeni igama lophando lwe-The Reward Foundation kunye nomsebenzi wokufikelela kwaye yonyuse negalelo lethu kuphuhliso lomgaqo-nkqubo woluntu eScotland." UMary uzakuthetha kumsitho weCYCJ nge-7 Matshi 2018 eGlasgow ebizwa: Amaseli amhlophe kunye namaseli entolongweni: Ukudibanisa iimfuno ezingenakuphuhliswa kwengqondo kunye neengcinga zabantu abatsha abasengozini.
Zininzi izizathu zokubangela ukuba abanye abatshatileyo basebenzise imifanekiso engamanyala. Naliphi na isishukumiso, izibini ezithandanayo zifuna uncedo kuma-therapists kwi-Relationships Scotland. Ngokutsho kuka-Anne Chilton, intloko yoqeqesho apho, kwi-1990 yoonografi yinkxalabo malunga ne-10% yezibini ezithatha ukucebisa. Namhlanje uthe ingxaki kwi-70%. Ukusetyenziswa kolawulo lweentlophu zoogqirha ngaphandle kolawulo kucatshulwa njengesizathu sokuqhawula umtshato kunye nokwahlukana kobudlelwane kwinani elinyukayo lolwalamano. Wathi, "bayazi malunga nendawo yesini kodwa akukho nto malunga nobuhlobo obusondeleyo."
Ukunceda abaphengululi baqonde kwaye bajongane nommandla omtsha we-porn-saturated, i-TRF yamenywa ukuba inike uqeqesho oluthile kwiqela elitsha labagqirha abaqeqeshwayo. Iingcali zezocansi ziphantse ziqeqeshiwe kwizengqondo. Namhlanje ukuqonda ukunyameka kokuziphatha kunye nophando lwe-neuroscience oluxhasayo luyinxalenye ebalulekileyo yoluphi uqeqesho lolwalamano lobuhlobo. Ikunceda umzekelo ukuqonda indlela amadoda angakumbi, abasebenzisi abakhulu be-pornography e-intanethi, angakwazi ukunyuka kwimibala emitsha yeentlobo zoononophala kwaye adinga ukukhutshwa kwinqanaba lokuba akukho mlingane onokulingana naye. Oku kwaziwa ngokuba 'ukunyamezela' into ekhethekileyo yokulutha.
Imbewu yatyalwa phantse kwiminyaka emithathu edlulileyo. Ngaloo xesha, i-CEO yethu uMary Sharpe uye wanikela ingcaciso kubasebenzi bezobugebengu bezobugebengu malunga nefuthe le-intanethi yeengcinga zobuntshongwane kunye nentsebenziswano yalo yobundlobongela bezesondo. Kulaphulaphuli wayengumcebisi wezifo zengqondo owayethathe umhlalaphantsi uBruce Ritson wesibhedlele saseRoyal Edinburgh kunye nomsunguli we-SHAAP (iScottish Health Action kwiingxaki zoTywala). Wayemangaliswa ngokufana phakathi kweempembelelo zoononografi kunye nefuthe lotywala kwi-brain brain. Zomibini ziyi-stimuli eqinileyo, xa isetyenziswe ngaphezu kwexesha elithile, ingakwazi ukuhlaziywa kwengqondo kunye nemisebenzi yayo, ingakumbi kwiibinzana ezincinci zolutsha. Eneneni uphando lubonisa ukuba ubuchopho babasebenzisi abancinci abancinci be-abuninzi bobugqwetha baqala ukuphendula ngokubhekiselele kwiinkalo ngendlela efanayo nobuchopho bee-cocaine eziluthayo kunye notywala xa kuboniswe imixholo efanayo.
Ngenxa yeso siganeko kunye neengxoxo ezilandelayo, uBruce Ritson wasimema ngokusesikweni ukuba sinike intetho yokuvula ye-Medico-Chirurgical Society yase-Edinburgh ye-190th iseshoni ngo-Oktobha kulo nyaka.
Oogqirha basesiphelo esiphezulu sonyango lwezempilo kangangokuba bahlala benomdla kunoma yimuphi ummandla osasazekayo wempilo yengqondo kunye nempilo. Sakwazi ukubonelela ngokutsha kwenkqubo yophando, kubandakanywa namaphepha abonisa ukuba 'ukulinganisela' ukusetyenziswa koononophelo (iiyure ezintathu ngeveki) kunokunciphisa ingcambu kwimimandla ephambili yengqondo. Ubuncinci bobuncinci bobuncinci bubuthathaka.
Njengelungu leBhodi ye-American-based organization, i-SASH, i-CEO yethu i-Mary Sharpe iyafuneka ukuba ibe khona kwinkomfa yonyaka. Akukho mthwalo kubo bonke. Kuyonwabile ukudibana kunye nokuxoxa ngeentuthuko zakutsha kwintsimi kunye neentlobo ezahlukeneyo zeeklinikhi, abaqeqeshi kunye nabaqeqeshi bezempilo evela kuwo wonke amazwe ase-US nangaphezulu. Lo nyaka sasiseSalt Lake City, eUtah.
Ukongeza kwiithethi ezigqwesileyo ezifana noNjingalwazi uWarren Binford owathetha ngophando malunga nomonakalo ongapheliyo kumaxhoba okuxhatshazwa kwabantwana (bona Intetho yeTEDx), saxoxa noMongameli we-SASH, uMary Deitch, ugqirha wezengqondo oqeqeshwe ngokusemthethweni malunga namava akhe ekuqhubaneni nabaphuli-mthetho ngokwesondo. Sikwadliwanondlebe nomfana oselula walapha, uHunter Harrington, (oneminyaka eli-17 ubudala) ophulukene nomlutha we-porn. Uyenzile injongo yakhe ukunceda abanye abaye babanjiswa kwaye apho kunokwenzeka ukuthintela abanye abantu abatsha ukuba bangene kwiingxabano. Udliwanondlebe oluhleliweyo luya kufumaneka kwiwebhusayithi yethu kungekudala.
Iqela leTsha leLutsha, iWonder Fools ithatha i-Porn kwi I-Coolidge Impact
I-Foundation Foundation yayiyiqabane elixhasayo kunye neRoyal Conservatory yaseScotland yeqela lezemidlalo yolutsha, iWonder Fools, kwimveliso yabo yeColidal Effect. Yabona Apha ibali lethu langaphambili kulo.
Ukuphila ngokubakho kwezemidlalo kuyisimo esihle kwimfundo ngokukodwa kubantu abatsha kunye nokukhathazeka ngokusondeleyo entliziyweni yabo.